ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၌ ဘတ်စ်ကားနှင့် တွဲယာဉ် တိုက်မိမှုကြောင့် လူ ၂၇ ဦး သေဆုံး ၊ ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိ - Xinhua News Agency
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအား တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ - အင်တာနက်)
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၌ တွဲယာဉ်တစ်စီး နှင့် ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကား တိုက်မိရာ လူ ၂၇ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးပြီး အခြားသူ ၃၀ ဦးကျော် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာများက ဇူလိုင် ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် Dera Ghazi Khan ခရိုင် Taunsa မြို့ရှောင်လမ်းအနီးတွင် တွဲယာဉ်တစ်စီး နှင့် အရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်လာသည့် ဘတ်စ်ကားတို့ တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းဖော်ပြမှုများအရ သိရသည်။
အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ အလျှင်အမြန် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအား နီးစပ်ရာ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘတ်စ်ကားသည် ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် Rajanpur ခရိုင်မှ Sialkot မြို့သို့ ဦးတည်မောင်းနှင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် လမ်းကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း ၊ ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း နှင့် ယာဉ်မောင်းမကျွမ်းကျင်မှုများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ISLAMABAD, July 19 (Xinhua) — At least 27 people were killed and over 30 others injured whenapassenger bus collided withatrailer in Pakistan’s eastern Punjab province, local media reported Monday morning.
Rescue teams rushed to the site and shifted the victims to the near hospital.
The ill-fated bus was heading to Sialkot city from the Rajanpur district of the province.Road accidents are quite frequent in Pakistan mainly due to poor roads, badly maintained vehicles and unprofessional driving. Enditem